Hlaziya idatha enkulu kwi-WordPress - Geofumadas
Hlaziya idatha enkulu kwi-Wordpress
NgoJanuwari, 2011 Internet kunye neBlogs
Ixesha liza xa iWindowsPress kufuneka ihlaziye imali enkulu yemali, ngendlela ephindaphinda.
Umzekelo osandul 'umzekelo kwimeko ye-hyperlink eneemvume ezichanekileyo, uhambe kwiGeofumadas.com uze uphume kwisiqununu ufuna ukulungiswa kwiinkalo ezininzi, njengoko ndibonisa kumzekelo olandelayo:
Indlela ehamba phambili yile:
http://geofumadas.cartesianos.com/ i-course-autocad-2011 /
kwaye entsha yile:
http://geofumadas.com/ i-course-autocad-2011 /
Kucacile, ukuba oko kuyimfuneko ukuguqula ixesha geofumadas.cartesianos.com yi geofumadas.com kunye nokwenza ngokubanzi kwemali kuyimfuneko kwi-database, ukuba indawo apho iblogi ibanjwe khona ivumela ukuba sikwenze njalo. Makhe sibone indlela yokwenza ngayo:
Ngaphambi kokuba wenze into ephosakeleyo njengale, kufuneka ukhuphe i-backup. Oku kwenziwa kwiThuluzi / Ukuthumela ngaphandle.
2. Ukufikelela phpMyAdmin. Kule meko, ndiyakwenza ukusuka eCpanel, apho iqonga apho iGeofumadas.com ibanjwe khona. Xa singaphakathi sakhetha i-database, ngokuqhelekileyo kukho kufuneka ibe yinye kuphela.
3. Khangela ukuba yeyiphi iithebhile equle igama lokutshintsha. Khumbula ukuba eli gama linokusetyenziswa kwiibhile ezihlukeneyo, umzekelo okungenayo i-wp_posts, izimvo wp_comments, njl. Ngoko okokuqala esikwenzayo kugqibe ukuba ikuphi. Ukwenza oku, sikhetha ithebhu "yophando", faka igama elifunyenweyo kwaye ukhethe zonke iitheyibhile.
Kwaye oko kufuneka kusibonise umphumo ofana nomfanekiso ophantsi.
4. Khangela iikholomu apho amagama atshintsha khona.
Ngenkinobho ethi "Khangela" ungaya kwiinkcukacha zekholam apho ikhona. Oku kwenziwa ngokuhlolwa okulula.
5. Ukufeza utshintsho
Yintoni ezayo elandelayo ukuyenza utshintsho nge syntax elandelayo:
update ibhodi iseti ikholomu = tshintsha (ikholomu, 'itekisi ukutshintsha','itekisi entsha')
update wp_posts iseti post_content = tshintsha (post_content, 'geofumadas.cartesianos.com','geofumadas.com')
Kule meko, itafile yi-wp_popasho, kunye nekhompi yeposi- Xa uyenzayo, umyalezo weendlela ezininzi ezichaphazelekayo kufuneka zivele. Kufuneka uqaphele ngokusebenzisa isimboli (') ngenxa yokuba ayifani nelinye elisetyenzisiweyo ('). Ukuba akunjalo, umyalezo wephutha uya kubuya kwi-syntax.
Kukulungele ukuphinda uqale umbuzo, ukusuka kwisinyathelo 3, ukuba ubone ukuba isiphumo sitshintshile. Kukwacetyiswa ukuba uhambe inyathelo ngesinyathelo, uqinisekise ukutshintshwa, hleze iphosakelo lomnxeba lisikhokele ekubekeni indawo eseleyo okanye into enjalo.
Akukwacetyiswa ukuba wenze le nkqubo ukuba awuzange wenze izenzo zangaphambili ezifana nokungenisa imifanekiso eyayingagcinwa kwiblogi yangaphambili. Ukuba asiyiyo, siya kuphuka indlela echanekileyo kwaye sibangele umonakalo ongenakuguquka. Kuba kukho iiplagi ezinjenge-LinkedImages kunye neenguqulelo zakutsha ze-WordPress xa ukungeniswa kusinika ithuba lokuzisa imifanekiso kwi-hosting entsha (nangona kungabikho bonke beza).
Post edlulileyo«Edlulileyo Zagg, obupheleleyo engcono iPad
Post Next Gajes Ukungeniswa Geofumadas.comOkulandelayo "